ဆိုလာပြားများ၏ အသုံးချမှုနယ်ပယ်များ - သတင်း - Cixi City Rixing Electronics Co., Ltd
1. အသုံးပြုသူနေရောင်ခြည်ပါဝါ- (၁) 10 မှ 100W အထိရှိသော သေးငယ်သော ပါဝါထောက်ပံ့မှုများ၊ ကုန်းပြင်မြင့်များ၊ ကျွန်းများ၊ သာသနာပြုနယ်မြေများ၊ နယ်ခြားမှတ်တိုင်များကဲ့သို့သော အလင်းရောင်၊ တီဗီ၊ ရေဒီယို ကက်ဆက်အသံဖမ်းစက်များကဲ့သို့သော ဝေးလံခေါင်သီသော ဒေသများတွင် စစ်ဘက်နှင့် အရပ်ဘက်ဘဝအတွက် အသုံးပြုသည်။ စသည်တို့ကို; (၂)3-5KW အိမ်ခေါင်မိုးဂရစ်-ချိတ်ဆက်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးစနစ်၊ (၃) Photovoltaic ရေစုပ်စက်- လျှပ်စစ်မီးမရှိသော ဒေသများရှိ ရေနက်တွင်းများတွင် သောက်သုံးခြင်းနှင့် ရေသွင်းခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပါ။
2. သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး- လမ်းပြမီးများ၊ ယာဉ်အသွားအလာ/မီးရထားအချက်ပြမီးများ၊ ယာဉ်အသွားအလာသတိပေးချက်/ဆိုင်းဘုတ်မီးများ၊ Yuxiang လမ်းမီးများ၊ အမြင့်အတားအဆီးမီးများ၊ အဝေးပြေးလမ်း/မီးရထားကြိုးမဲ့ဖုန်းတဲများ၊ ပိုင်ရှင်မဲ့လမ်းအဖွဲ့များအတွက် ပါဝါထောက်ပံ့မှု စသည်
3. ဆက်သွယ်ရေး/ဆက်သွယ်ရေးနယ်ပယ်-နေရောင်ခြည်ပိုင်ရှင်မဲ့ မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် ထပ်ဆင့်လွှင့်ဌာန၊ optical cable ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးစခန်း၊ ရုပ်သံလွှင့်/ဆက်သွယ်ရေး/စာမျက်နှာ ပါဝါစနစ်၊ ကျေးလက်ကယ်ရီယာတယ်လီဖုန်း photovoltaic စနစ်၊ အသေးစားဆက်သွယ်ရေးစက်၊ စစ်သား GPS ပါဝါထောက်ပံ့ရေးစသည်တို့။
4. ရေနံ၊ အဏ္ဏဝါနှင့် မိုးလေဝသနယ်ပယ်များ- ရေနံပိုက်လိုင်းများနှင့် ရေလှောင်တံခါးများအတွက် သံလိုက်ဓာတ်အားကာကွယ်သည့် ဆိုလာဓာတ်အားပေးစနစ်များ၊ ရေနံတူးစင်များအတွက် အသက်နှင့် အရေးပေါ် ဓာတ်အားထောက်ပံ့မှု၊ အဏ္ဏဝါစမ်းသပ်ကိရိယာများ၊ မိုးလေဝသ/ဇလဗေဒ လေ့လာရေးကိရိယာ စသည်တို့။
5. မီးအိမ်ပါဝါထောက်ပံ့မှု- ပန်းခြံမီးအိမ်များ၊ လမ်းမီးအိမ်များ၊ ခရီးဆောင်မီးအိမ်များ၊ စခန်းချမီးအိမ်များ၊ တောင်တက်မီးအိမ်များ၊ ငါးဖမ်းမီးအိမ်များ၊ အနက်ရောင်အလင်းမီးအိမ်များ၊ tapping မီးအိမ်များ၊ စွမ်းအင်ချွေတာသောမီးအိမ်များ စသည်တို့ဖြစ်သည်။
6. Photovoltaic ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ- 10KW-50MW လွတ်လပ်သော photovoltaic ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၊ လေအား-နေရောင်ခြည် (ဒီဇယ်) ဖြည့်စွက်ဓာတ်အားပေးဌာန၊ အမျိုးမျိုးသော ကြီးမားသော ယာဉ်ရပ်နားစခန်း အားသွင်းရုံများ စသည်တို့။
7. နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး အဆောက်အဦ- နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ ပေါင်းစပ်ခြင်းသည် အနာဂတ်တွင် ကြီးမားသော အဆောက်အအုံများ စွမ်းအင်ဖူလုံမှုရရှိစေရန် စွမ်းဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊
8. အခြားနယ်ပယ်များတွင်- (1) ပံ့ပိုးပေးသည့်ကားများ- ဆိုလာကား/လျှပ်စစ်ကားများ၊ ဘက်ထရီအားသွင်းကိရိယာများ၊ ကားလေအေးပေးစက်၊ လေဝင်လေထွက်များ၊ အအေးသောက်သေတ္တာများ၊ (၂)နေရောင်ခြည်ဟိုက်ဒရိုဂျင် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် လောင်စာဆဲလ် ပြန်လည်ထုတ်လုပ်သည့် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးစနစ်များ၊ (၃) ပင်လယ်ရေကို စွန့်ထုတ်ခြင်း ၊ (၄) ဂြိုလ်တုများ၊ အာကာသယာဉ်များ၊ အာကာသနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး စက်ရုံများ၊